02 / 08 / 2019 - rayhab ဖြစ်ပါသည်
နေ့: သြဂုတ်လ22019
တူရကီအသံကအပြောင်းအရွေ့နှင့်အတူပြည်တွင်းနှင့်အမျိုးသားရေးစက်မှုလုပ်ငန်းများဆောင်ကြဉ်းလာတယ်။ ငါတို့စိတ်နှလုံးကိုအပေါငျးတို့သရှိန်ပြင်းထန်တဲ့နေ့တွေမှာကာကွယ်ရေးနှင့်အာကာသစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အစပျိုးအဆိုပါရွေ့လျား။ အရူးပျား၏တူရကီ Demiryolc မှ habermarmar အစွန်အဖျားလိုင်းရထားလမ်းကိုတင်သောစက်6ကီလိုမီတာနှင့်အုပ်စုသည်နေ့အဘို့ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည် [ပို ... ]
Bursa တှငျကငျြးပခဲ့တူရကီကုန်သည်များနှင့် Stock Exchange များသမဂ္ဂ (TOBB), ဥရောပသမဂ္ဂနှင့်အတူ ပူးပေါင်း. တူရကီ၏တူရကီစီးပွားရေးပေါ်လစီသုတေသနဖောင်ဒေးရှင်း (TEPAV) (အီးယူ) ရန်ပုံငွေနှင့်စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးနှင့်စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ Bursa ကုန်သည်ကြီးများအသင်း၏ခေါင်းဆောင်မှုအောက်တွင် (BCCI) Mahir လက်စွဲ Project မှ ပူးပေါင်း. ထုတ်ယူသွား [ပို ... ]
တူရကီဘားအသင်း TCDD တူရကီရထားဘူတာအဆောက်အအုံဖို့တရားစီရင်ရေးထွက်ခွာ
တူရကီဘားအစည်းအရုံးသည် TCDD တူရကီရထားဘူတာကျောင်းပရဝုဏ်နေထိုင်ရန် Center ကဆု Medipol တူရကီတက္ကသိုလ်ကိုရည်မှတ်ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်တှငျတှေ့ 1928 အတွက်သမိုင်းဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ တန်ခိုးမရှိအဖြစ်တူရကီဘား Association ကဖန်ဆင်းအားလုံးထုတ်ပြန်ချက်များမရှိရှေးခယျြခံရ; တစ်ဦးကမြို့ [ပို ... ]
Büyükakın, Gebze Darıca Metro လေ့လာမှုအားဖြင့်ပြန်လည်သုံးသပ်ခဲ့သည်
Marmara နှင့်အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ်မြို့တော်ဝန် Assoc ၏အဓမ္မလုပ်အားပေးခိုင်းစေမှုများရှိဆဲပြည်ထောင်စု။ ဒေါက်တာ Tahir Büyükakın, Gebze Darıcaမြေအောက်ရထားလိုင်းကိုအတွက် feverishly ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောအလုပ်နီးကပ်စွာနောက်ကိုလိုက်နေဆဲဖြစ်သည်။ ထိန်းချုပ်မှုမြို့စတုရန်းနှင့်ဖြစ်ပွားနေသောလေ့လာမှုများမှာရာအရပျ၌နေသော Gebze [ပို ... ]
အဆိုပါကားဂိုဒေါင်ထဲမှာစုပေါင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းကိုဝယ်ယူမှုဖြင့်ဖုံးလွှမ်းAyazağaန်ထမ်းများ၏ညွှန်ကြားမှုအထွေထွေခြင်းဖြင့်ပြန်တမ်း IETT သူကိုနူးညံ့စာချုပ်ကိုချုပ်ဆိုကြသောဖြစ်စဉ်ကိုနှောင့်ယှက်ခြင်းမရှိဘဲလုပ်ကိုင်ဖို့ဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်။ ယနေ့အချို့သောသတင်းစာများအတွက်တည်ရှိပြီး, "İETTလုပ်သားများပြုအသေသတ်ခြင်း" နှင့် "850 31 ၏ IETT ကားမောင်းသူ [ပို ... ]
မြို့တော်မြူနီစီပယ်၏ရည်မှန်းချက်နှင့်အတူ၎င်း၏လှုပ်ရှားမှုများဆက်လက်ထားတဲ့ Bursa တဲ့ Metropolitan မြို့တော်ဝန် Alinur Aktas, 'တစ်ဦးထက်ပိုလက်လှမ်းမှီမြို့ကြီးများ' 'လမ်းအားလုံးခရိုင်က၎င်း၏အလုပ်ကိုဆက်လက်ကပြောသည်။ Bursa တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်တစ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအခြားရွေးချယ်စရာဖြေရှင်းချက်အတွက်မြို့လယ်မှာရှိတဲ့ပိတျဆို့နတေဲ့သွေးလွှတ်ကြော [ပို ... ]
ကို semi-automatic အတားအဆီး system install လုပ်ခြင်းခံခဲ့ရသည်မြို့မှာSoğukkuyuအဆင့်ကိုလက်ဝါးကပ်တိုင်မှ Aydin Efeler အကြားတည်ရှိသောတူရကီရဲ့အန္တရာယ်အရှိဆုံးတန်းဖြတ်။ လာမယ့်သီတင်းပတ်အတွင်း operating စတင်ပါလိမ့်မည်သည့်အသံလတံ့သောစနစ်သစ်နှင့်အလင်းသတိပေးမှအကူးအပြောင်းကာလအတွင်းရထားမောင်း။ [ပို ... ]
သမိုင်းသြဂုတ်လ21914 အတွက်ယေဘုယျစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ကြေငြာခဲ့ပါတယ်နှင့်မီးရထား၏နောက်ပိုင်းတွင်စစ်ရေးအထွေထွေညွှန်ကြားမှုယနေ့ရထားလမ်းပြင်သစ်နှင့်ဗြိတိန်ကုမ္ပဏီများသည်သိမ်းယူခဲ့သည်။ ဂျာမန်နှင့်သြစတြီးယားနိုင်ငံသား, ကုမ္ပဏီများကဆက်လက်ပြောကြားသည်။ Hejaz မီးရထားစစ်တပ်အုပ်ချုပ်ရေး [ပို ... ]